FAQs - Dongguan Hobrin Badge And Gift Co., Ltd.
Maherin'ny 10 taona niainany ny famokarana. Ny orinasa dia manana faritra fananganana 2000 metatra toradroa miaraka amina mpiasa miofana 100+ mahery, fitaovana famonoana maty ho an'ny zinc 4, milina fanoratana 2, milina fanaovana hajia maromaro, milina famenoana loko miloko 4, fanontana offset 2 andalana, atrikasa fanodinana lanyard miandry. Afaka manome ny mpanjifa vokatra avo lenta amin'ny vidin'ny fifaninanana.
Ny tanjonay dia ny ho lasa mpiara-miasa stratejika maharitra. Izahay dia mametraka ny mpanjifanay ho lohalaharana ary manampy anao hanatsara ny tombom-barotra. Nahazo baiko bebe kokoa avy aminao izahay, ka samy handresy amin'ny varotra izahay roa tonta.
Izahay dia za-draharaha sy matihanina amin'ny famokarana fanaporofoana ny sangan'asa, afaka mahazo fisoritana mazava avy aminay avy hatrany ianao ary hampiasa maimaim-poana.
Fanaterana haingana, fandefasana ara-potoana
Ny santionany dia 5-7 andro aorian'ny fankatoavana ny sangan'asa, ary ny famokarana betsaka dia 10-15 andro aorian'ny fankatoavana ny santionany.
Fitaterana azo antoka
Mampiasa ny FedEx, DHL, UPS, TNT ary fantsona azo antoka maro izahay handefasana tsara ny vokatray.
Ny fe-potoana fandoavam-bola mahazatra anay dia ny fametrahana 30% alohan'ny famokarana ary ny fifandanjana 70% alohan'ny fandefasana. Manana ny fahaizana manome ny mpanjifa vokatra tsara amin'ny vidin'ny fifaninanana izahay
Kitapo antsipiriany: 1PC / kitapo plastika, 100PCS / kitapo lehibe, 100PCS / baoritra. Haben'ny boaty: 38 × 27 × 20CM
Andininy fanaterana: 7 andro ny santionany, 13-18 andro aorian'ny fanamafisana ny santionany
Misokatra amin'ny famolavolana mahazatra ny zava-drehetra
Famolavolana sy famokarana an-trano
Zavakanto famolavolana maimaim-poana
Tsy misy fetran'ny fatra farafahakeliny
Rehefa mahatratra habe iray ny filaharana dia haverina aminao ny sarany bobongolo ary afaka manome serivisy ho an'ny mpanjifa feno sy azo antoka